Amaqembu eMicrosoft eza eLinux futhi ayingxenye yokuqala yeHhovisi 365 ukufika | Kusuka kuLinux
Amaqembu eMicrosoft eza eLinux futhi ayingxenye yokuqala yeHhovisi 365 ukufika emhlabeni
Ngemuva kweminyaka eminingi yempi engapheli iMicrosoft ebhekene neLinux izinto sezishintshile futhi sekunezinyanga ezimbalwa manje IMicrosoft isishintshe isimo yaqala nokwenza izinto kahle. Ngayo waqala ukukhipha imikhiqizo kusuka kuMicrosoft ukuhambisa kumthombo ovulekile, iMicrosoft nayo yaqala ukunikela ku-Linux kernel phakathi kwezinye izinto eziningi.
Yize kungenye yama-oda acelwe kakhulu Kubathandi abaningi beLinux ukufika kwehhovisi labo "Office", Yikuphi kuze kube manje usele ethembeni kuphela ukuthi kufike usuku olulodwa. Njengoba iHhovisi lingakhelwanga iWindows kuphela, inohlobo lwayo lweMac OS, kanye namapulatifomu weselula.
Futhi asikwazi ukukhohlwa inguqulo eku-inthanethi yale suite futhi noma inezinketho eziningi ngenxa yalokho ayikafinyeleli kwi-Linux ngokwendabuko. Noma kubonakala sengathi lokhu kungashintsha, njengoba iMicrosoft isanda kumemezela muva nje ukuthi ilungiselele inguqulo yeLinux yesikhulumi seThimba leMicrosoft.
1 IMicrosoft ifuna ukuqhudelana neSack futhi imemezele Amaqembu eMicrosoft eLinux
2 Landa bese ufaka Amaqembu e-Microsoft we-Linux
IMicrosoft ifuna ukuqhudelana neSack futhi imemezele Amaqembu eMicrosoft eLinux
Lokhu ipulatifomu entsha eyenziwe yiMicrosoft esekela ukusebenzisana ezinkampanini; lolu hlobo lwesoftware, elenza atholakale amagumbi okuxoxa, imithombo yezindaba namaqembu ngonyaka wezinkampani. Ungenza futhi amavidiyo ku-Twitch, wabelane ngamafayela futhi ufinyelele i-Notepad, ama-iPages, i-Powerpoint ne-OneNote.
Ngalezi zindaba Amaqembu eMicrosoft azoba yingxenye yokuqala yehhovisi le-Office 365 eliguqulelwe amadeskithophu asuselwa ku-Linux.
Kala ihlose ukushayela ukwamukelwa kwethimba phakathi konjiniyela be-software, abavame ukukhetha ukusebenza ku-Linux. Ukuntuleka kokusekelwa kohlelo olusebenzayo lomthombo ovulekile sekwenze kwaba nzima ngeMicrosoft ukuqhudelana neSlack, esekele iLinux iminyaka.
Iklayenti elisha le-Microsoft Teams le-Linux lingaqinisekisa izinhlangano eziningi ukuthi zijoyine Amaqembu.
Uhlobo lwe-Linux lusesigabeni sokuqala sokuhlola futhi ayihlinzeki ngobunye obugcwele ekusebenzeni nenguqulo yeWindows.
Isibonelo, lapho usebenza ku-Linux, imisebenzi ephathelene nezicelo zehhovisi nokwabelana kwesikrini ngesikhathi sokuxhumana akukasekelwa.
Ukufuduka kwenzelwa ukwenza lula ukusebenzisana kwabasebenzi ezinkampanini, ezinye zazo ezisebenzisa i-Linux kwideskithophu futhi phambilini bekufanele zisebenzise i-Skype engekho emthethweni yamakhasimende weBhizinisi ukusebenzisana nazo zonke izingqalasizinda.
Ngemuva kokuthi amaMicrosoft Teams angene esikhundleni seSkype for Business, inkampani yanquma ukukhipha imbobo esemthethweni yeLinux yomkhiqizo omusha.
Ekugcineni, iMicrosoft iphawula ukuthi isebenza ethekwini leLinux ukuxhasa wonke amakhono ayisisekelo wohlelo.
Landa bese ufaka Amaqembu e-Microsoft we-Linux
Kulabo abanentshisekelo yokufaka uhlelo ekusatshalalisweni kwabo kweLinux, kufanele bakwazi lokho Ukwakhiwa okusemthethweni kwamaMicrosoft Teams weLinux kuyatholakala ukuze kuhlolwe kumafomethi we-deb ne-rpm. Yize ngaphakathi kwezinqolobane ze-Arch Linux AUR ungathola futhi iphakethe elithatha amaphakheji ahlinzekwa yiMicrosoft.
Ukulanda amaphakheji ungakwenza kusuka ku- isixhumanisi esilandelayo.
Ngemuva kokulanda iphakethe, ungalifaka ngomphathi wakho wephakheji owuthandayo noma kusuka kusiginali ngokuthayipha omunye wemiyalo elandelayo ngokuya ngephakeji onayo.
Ukufakwa kwephakeji ye-Deb
Rpm ukufakwa kwephakeji
Okokugcina, kulabo abangabasebenzisi be-Arch Linux, ezinye izakhi zayo (iManjaro, Arco Linux, njll.) Bangafaka kusuka kumakhosombe we-AUR. Ngalokhu, kumele babe nenqolobane enikwe amandla kufayela labo le-pacman.conf futhi babe ne-wizadi ye-AUR efakiwe. Uma ungenayo, ngincoma eyodwa Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Manje ku-terminal kufanele umane uthayiphe umyalo olandelayo:
P.S. Phakathi kwamaphutha ajwayelekile kakhulu ale nguqulo yangaphambilini, kukhona amaphutha ngomsindo oxazululwa kusetshenziswa amahedfoni noma ukubheka ukumiswa kwe-pulseaudio.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Amaqembu eMicrosoft eza eLinux futhi ayingxenye yokuqala yeHhovisi 365 ukufika emhlabeni
Ikhodi ye-Visual Studio: Uhlobo olusha 1.41 olutholakala ngonyaka ka-2020
I-Blockstack: Ipulatifomu Yomthombo Ovulekile Esetshenziselwe Ukusetshenziswa